Imibono emi-6 emihle kakhulu yokugoqa izikhumba ukuze uyihlole - iPureWow - Ekhaya
Izifundiswa Ezingu-6 Zezingubo Zokugoqa Okuyiqiniso * Kulula Ukulandela
6 Napkin Folding Tutorials That Are Genuinely Easy Follow
Ubuke ngokwanele Ithebula le-Chef ukuthi uzizwa usukulungele ukushaya isidlo esifanele izinkanyezi saseMichelin ekhaya, kepha ukuze ube nobusuku obuhle kakhulu kuyo yonke imininingwane encane. Intwasahlobo yokuhle iwayini , shayela amakhono akho wokuhlela izimbali kuleso sisekelo bese uzama isandla sakho kunoma iyiphi yalezi zifundo zokugoqa i-napkin. Zibukeka zihlaba umxhwele, kodwa kulula ukuzikhohlisa (njengaku, ungakwazi ukusonga ngayinye ngemizuzu emibili noma ngaphansi — ezinye ngemizuzwana nje). Sizokunikeza ukwehlukaniswa kwezinyathelo ngezinyathelo ngakunye, kanye nokukalwa kobunzima (1 = great for newbies, 5 = cishe ungumculi wethawula lomkhumbi). Kepha, ngokweqiniso, indlela elula yokufunda ukumane ubuke ividiyo ngayinye engezansi.
Imfihlo Yokugoqwa Kwamaphaphu We-Pro-Level:
Konke kumayelana nokuthwebula noku-ayina ukuthola imigqa ehlanzekile, ekhanyayo. Qala ngendwangu yelineni esanda kugezwa (futhi yomisiwe). Spritz kusitashi (sithanda I-Laiffress's Stiffen Up ), unikeza ifomula imizuzwana embalwa ukusetha, bese u-ayina i-napkin yakho usebenzisa ukusethwa okufanelekile kohlobo lwendwangu oyisebenzisayo. Lokhu kuzonikeza ama-napkins ukuqina okudingayo ukubamba ukwakheka kwawo, ikakhulukazi uma udala imiklamo emi mpo.
THENGA MANJE THENGA MANJE
Amaphaphu KaKotini WeDenim
Amaphinki Okudliwayo Okudliwayo
OKUSHIWO: Izindlela eziyi-8 Zokusetha Ithebula Leqembu Elingeyona Elikahle
Imibono Yethu Eyintandokazi Yokusonga Amafutha:
1. I-Peasy Elula
Kulula kusegameni ngesizathu; akutholi lula kakhulu kunalokhu. I-Easy Peasy ilungele ama-napkins anemifanekiso, ngoba ikuvumela impela ukuthi ubukise ngemidwebo.
Izinga lobunzima (kusuka ku-1 kuye ku-5): 1
Beka i-napkin art-side-down etafuleni (uma uyiphenya ekugcineni, izovezwa).
Songa ohlangothini lwesobunxele nangakwesokudla lwe-napkin ukuze imiphetho ihlangane maphakathi.
Songa yonke le napkin ngesigamu futhi, wakhe unxande omude, omncane.
Flip it ngaphezulu bese uyibeka ngokulandelana kwepuleti.
Kuyinto enhle, hhayi ephuzile. Futhi, ungaphonsa ndawonye i-napkin ngayinye emise okomnsalo ngemizuzwana engaphansi kwengu-30. Isethembiso sikaPinky.
Izinga Lobunzima: 1
Songa i-napkin nje ngama-intshi amahloni okuba uhhafu.
Lisonge futhi, kulokhu libe uhhafu ngokuphelele.
Flip it over bese ugoqa zombili iziphetho ngaphakathi, uzivumele zidlule kancane.
Slayida a indandatho yama-napkin phakathi kwawo.
Flip the napkin back over and fluff ohlangothini ngalunye ukuze ikwazi ukuphuma, yakhe umumo womnsalo.
Ilula, ihlanzekile, yakudala. Akukho lutho olumnandi ngale napkin emise imvilophu.
Izinga Lobunzima: ezimbili
Beka i-napkin etafuleni ukuze ikona elilodwa libheke kuwe (lizobukeka njengesimo sedayimane, kunesikwele esijwayelekile).
Thatha ikhoneni elingakwesokudla bese uligoqa izingxenye ezimbili kwezintathu zendlela enqamula i-napkin.
Phinda ngekhona eliphambene — lizodlula nje emaphethelweni e-napkin, wakhe umsila omncane.
Faka umsila phakathi.
Bamba ikhona ezansi (okusondele kakhulu kuwe) bese uligoqa cishe ingxenye yesithathu yendlela enyukayo.
Manje phinda enye ingxenye yesithathu yendlela phezulu.
Bamba ikhoneni eliphezulu bese uligoqa phansi, wakhe isimo semvilophu evaliwe.
4. I-Diagonal Pocket Fold
Le ndlela yokugoqa izindwangu ibukeka iyinkimbinkimbi, kepha uma usubona ukuthi kulula kanjani Ilineni le-CV kuyaphula, uzobe usulungele ukuyizama ngokushesha. Idizayini yephakethe ilungele ukubeka isilivaware, imenyu encane (noma ikhadi lekhadi), noma ukunikeza izivakashi umzuzu omangazayo nenjabulo ngesikhumbuzo esincane, njengembali esanda kusikwa.
Izinga Lobunzima: 3
Beka i-napkin phambi kwakho, wakhe isimo sesikwele. Songa leli napkin libe uhhafu ngokuvundlile, bese uligoqa libe uhhafu ngokuqondile. Kufanele ibukeke njengesikwele esincane.
Thola uhlangothi oluvulekile lwelineni bese ulibeka kude nawe. Bamba ikona elivuliwe bese ugoqa isendlalelo esingaphezulu maphakathi. Phinda ngezendlalelo ezimbili ezilandelayo.
Flip i-napkin ngaphezulu. Bamba izinhlangothi ezingakwesobunxele nangakwesokudla se-napkin bese uyigoqa ibe yizintathu.
5. Isihlahla SikaKhisimusi
Masibe ngokoqobo: Uma ubukisa ngamakhono akho we-napkin origami, kungenzeka kube umcimbi okhethekile (yize udos kuwe uma kunguLwesibili nje olumaphakathi). Lesi sihlahla se-twee siyindlela yomkhosi yokusetha itafula lakho ngesikhathi samaholide.
Izinga Lobunzima: 4
ama-movie aphezulu ayishumi othando hollywood
Songa i-napkin ngesigamu.
Sigoqa ngesigamu futhi bese usiphendula ukuze imbobo ibheke ngakuwe (izobukeka njengokuma kwedayimane ngaphezulu).
Ukuqala ekhoneni eliseduzane nawe, bamba ungqimba lwendwangu oluphezulu kakhulu bese uligoqa ubheke ekhoneni eliphezulu, cishe uhhafu wamasentimitha unamahloni okukuthinta. Phinda ngezendlalelo ezisele zendwangu, ugoqe uhhafu wamasentimitha ngamunye ngaphansi kongqimba owedlule.
Beka isandla sakho phezulu kwesihlahla bese uphenqa yonke i-napkin ngaphezulu.
Gijimisa umunwe wakho onqenqemeni olungezansi lwe-napkin, ume phakathi. Bamba umunwe wakho lapho.
Ngesinye isandla sakho, bamba ikona elingezansi kwesokudla le-napkin bese uligoqa ngaphezulu kwe-diagonally. (Ikhona elingezansi lizothinta onqenqemeni lwesobunxele lwe-napkin, cishe nge-intshi noma ngaphansi kwekhoneni eliphezulu le-napkin.)
Songa elinye ikona ngaphezulu kwe-diagonally. Kuzobukeka sengathi ugqolozele isigaxa esimnandi ngenhla ekhonjiwe.
Flip phezulu ekhonjiwe kwesigaxa kuwe.
Njengomculi we-napkin ne-YouTuber UJenny W. Chan uthi, KULUNGILE uma umphetho ongezansi wale napkin usalunguza phezulu — uzozilungisa uma ushwibeka isigaxa ngo-180 degrees, usiphendule ukuze wakhe isimo somuthi wakho.
Tuck ngalinye lamakhona akhonjiwe ngaphansi, wakhe umugqa oqondile (aka izingqimba zamagatsha ezihlahla).
Lapha kulapho isitashi sibaluleke khona, hhayi nje ukusiza i-napkin ime mpo, kepha futhi nokwakha leyo swirl emnene, edonsela phansi amandla.
Izinga Lobunzima: 5
Beka indwangu yetafula etafuleni ukuze ibukeke njengesikwele phambi kwakho.
Gijimisa umunwe wakho emaphethelweni agoqiwe uze ufike enkabeni. Ibambe lapho.
Ngesinye isandla sakho, bamba ungqimba ophezulu wendwangu kusuka ekhoneni elingezansi kwesokudla bese uyigoqa ukuze ihlangane nekhona elingezansi kwesokunxele.
Cindezela phansi ukuze wakhe i-crease eqinile. Flip ikhoneni emuva uye ngakwesokudla.
Manje, finyelela ekhoneni elingezansi kwesokunxele le-napkin. Bamba ungqimba ophezulu wendwangu kuphela bese uyigoqa ukuze ihambisane nekhoneni elingezansi kwesokudla. Cindezela phansi ukuze wakhe i-crease eqinile. Kufanele ibukeke njengonxantathu obanzi njengamanje.
Bamba ikhoneni elingakwesobunxele bese uligoqa, ukuze lihlangane nekhona elingakwesokudla. (Bheka lowonxantathu omncane omnandi we-isosceles owenzile!)
Ukuqala kwelinye lamacala amabili alinganayo, qeda i-napkin. Phakamisa i-napkin etafuleni, uyiyeke ivule kancane. Sebenzisa iminwe yakho ukulungisa imiphetho ye-napkin, uyiphakamise, ukuze inganqamuki.
OKUSHIWO: Iyini I-Permanent Press futhi Kufanele Ngiyisebenzise Nini?
izindaba ezimnandi zothando hollywood
ama-movie aphezulu e-hollywood ezothando
isilungiselelo esihle kakhulu sokwenza izimonyo kwesikhumba esinamafutha
amakhambi asekhaya enkanyamba nezinwele ziyawa
kumele ubuke ama-movie wentsha
uhlu lwamafilimu omlando hollywood